webservicestapanai [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/b/b56ee0977d315ecf992080f5f33b56c2.xhtml failed
Web Services: Tapany I
26/03/05 Mpanoratra : FRAZ
Web Services, @ izao vanin’andro izao dia matetika heno foana miverimberina io ary ho an’ireo orinasa aza dia efa tsy azo hialana intsony izany fa ny ankabeazany na Europe na USA dia mampiasa izany avokoa. Amin’ity lahatsoratra ity isika dia hiresaka kely fampidirana ny momba azy sy ny hoe ahoana ny tena fandehany.
Amin’izao fotoana izao dia maro karazana ny software sy ny hardware @ resaka informatika. Raha ny resaka systeme fotsiny ohatra dia misy ny Windows, Linux, Mac OS sns. Ireny systeme ireny dia manana ny fomba fanamboarana ny application miodina eo amboniny, samy manana ny langage ampiasaina. Ny olana @ ireny anefa dia izao, raha misy application namboarina ho an’ny plateforme iray t@ langage anankiray dia sarotra ihany ny mampiasa azy amin’ny plateforme hafa. Sarotra ihany koa ny mampiasa ohatra hoe librairie efa vita mandeha tsara anankiray tamin’ny plateforme iray dia ampiasaina anaty application amin’ny plateforme hafa natao t@ langage hafa. Eo no mipetraka ny olana. Resaka fiaraha-miasa eo @ application samihafa (Interoperability)
Anisan’ny mamaha io olana voalaza eo ambony io ny Web Services. Marina fa hoe efa misy sy betsaka ny application/site Web izay efa anisan’ny mamaha io olona io, izay mampiasa ny protocole standard HTTP, ny Web Services dia manampy izany @ fampiasana ny standard HTTP sy XML. Ny Web Services dia voalohany indrindra tsy miankina @ plateforme ary afaka hamboarina @ izay fitaovana tianao hanamboarana azy. Mitovy ny fijerin’ny Client mihinana ny Services na nataonao t@ .Net na J2EE na php na hafa ny nanamboarana azy.
Raha tsorina izany ny Web Services dia izao : Ny Web Services dia application iray fantatra hoe aiza no misy azy (URI), ary azo fantarina hoe inona no ataony (Description XML) ary afaka ampiasaina anaty application hafa tsy voatery application Web amin’ny alalan’ny fifanakalozana resaka XML ary ireo resaka ireo ampitaina amin’ny alalan’ny protocole internet (HTTP ohatra).Noho ireo toetra hananany ireo dia tsy maintsy manaraka standard nifanekena ny fomba fanamboarana azy.
Lahatsoratra Architecture Design Patterns
webservicestapanai.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43